Ny mahasamihafa ny fandrahoana induction sy ny fandrahoana infrared
Ny fitsipiky ny fandrahoan-tsakafo infrared: aorian'ny fanamafisana ny vatan'ny lafaoro fanamainana (vatana fanamainana vy nikel-Chromium), mahomby be eo akaikin'ny tara-pahazavana. Amin'ny alàlan'ny asan'ny takelaka microcrystalline dia misy taratra infrared tena avo lenta. Mahitsy ny làlan'ny afo, ary ...
Nanomboka namokatra fandrahoan-tsakafo indostrialy i Shina tamin'ny taona 1980, taorian'ny fandrosoana efa ho 30 taona, ny indostrian'ny fandrahoana induction dia manafaingana ny fironana amin'ny fampandrosoana, ny mpanao fandrahoana sakafo induction dia mitana andraikitra lehibe kokoa amin'ny fiainan'ny olona. Tamin'ny 2005, nitombo rap ny indostrian'ny fahandroan-tsakafo ao Shina ...
Ao an-dakozia, ny induction cooker dia iray amin'ireo fitaovana ao an-dakozia izay fahita matetika. Saingy amin'ny fanasokajiana ny lozisialy fampidirana dia mazava tsara ianao tsirairay avy? Inona avy ireo fahandro fampidirantsika mahazatra? Ny lahatsoratra manaraka dia manazava ny fanasokajiana ny lozisialy fampidirana an-tsipiriany, jereo tsara! Mifanaraka ...
Tamin'ny 2014, amor dia namintina ny anton'ilay vilany fandrahoan-tsakafo ary nanamafy ny fahamendrehan'ny kalitao. Tamin'ny 2016, amor dia nametaka patanty teknika 48. Tamin'ny taona 2020, ny amor dia nanavao ny fandrahoan-tsakafo fampidiran-masoandro avy amin'ny masoandro sy ny lakozia infrared an'ny masoandro. Hetsika ataon'ny orinasa Misy hetsika fitoriana atao roa isan-taona. Amor will provi ...